Phinda Ukhulise Ifayela le-2GB PST.
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Repair Phinda Ukhulise Ifayela le-2GB PST
DataNumen Outlook Repair - Phinda Ukhulise Ifayela le-2GB PST
Ukusebenzisa DataNumen Outlook Repair ukuthola kabusha ifayela lakho le-2GB PST ngokweqile, ngo:
Yiguqulele kufomethi entsha ye-Outlook 2003.
Yahlukanise ngamafayela amancane ambalwa
I-Microsoft Outlook 2002 nezinguqulo eziphansi zikhawulela usayizi wefayela le-PST libe ngu-2GB. Noma nini lapho usayizi wefayela le-PST ufinyelela noma weqa lowo mkhawulo, ngeke ukwazi ukufinyelela kuwo, noma awukwazi ukwengeza idatha entsha kuwo. Lokhu kubizwa inkinga enkulu yefayela le-PST.
IMicrosoft ayinayo indlela egculisayo yokuxazulula inkinga. Isixazululo esihle kakhulu umkhiqizo wethu DataNumen Outlook Repair, Engabuyisa ifayili le-PST elikhulu kakhulu kalula nangendlela efanele. Ukwenza lokhu, kunezindlela ezimbili ezihlukile:
Uma une-Outlook 2003 noma izinhlobo eziphakeme ezifakiwe, unga uguqule ifayela le-PST elikhulu kakhulu libe yifomethi entsha ye-Outlook 2003, ongenawo umkhawulo wosayizi ongu-2GB. Le yindlela ekhethwayo.
Uma ungenayo i-Outlook 2003 noma izinhlobo eziphakeme, unga hlukanisa ifayela elikhulu le-PST libe ngamafayela amancane ambalwa. Ifayela ngalinye liqukethe ingxenye yedatha esefayilini le-PST yoqobo, kepha ingaphansi kuka-2GB ukuze ukwazi ukuyifinyelela nge-Outlook 2002 noma izinhlobo eziphansi ngaphandle kwezinkinga. Le ndlela iphazamisa kancane njengoba udinga ukuphatha amafayela amaningi we-PST ngemuva kwenqubo yokuhlukanisa.
Imininingwane eningiliziwe mayelana nenkinga yefayela le-PST enkulu.
Phinda Ukhulise Ifayela le-2GB PST